भदौ ११ गते आउँदै बुद्वभूमी हाइड्रोपावरको आइपियो । कस्तो कम्पनी हो ? कति दिने आवेदन ? - परिकल्पना - PARIKALPANA
गृहपृष्ठ / आर्थिक / भदौ ११ गते आउँदै बुद्वभूमी हाइड्रोपावरको आइपियो । कस्तो कम्पनी हो ? कति दिने आवेदन ?
by Ramji Acharya on Friday, September 24, 2021 in आर्थिक